IsiTshayina Android - Androidsis | I-Androidsis
Iimpawu zaseTshayina zinobukho obandayo kwimakethi yefowuni ye-Android. Amanqaku afana neHuawei, Xiaomi, OnePlus okanye iLenovo ziqhelekile kubasebenzisi. Ukongeza ekubeni zezinye zeemveliso ezithengisa kakhulu emhlabeni. Kolu luhlu siza kuthetha ngazo zonke ezi mveliso zaseTshayina ezisebenzayo ngoku.
Ke uya kuba nakho ukwazi iifowuni eziqaliswa zezi mveliso zaseTshayina, imihla yazo yokuphehlelelwa okanye uhlalutyo olwahlukeneyo lwezi zixhobo zoyisa izigidi zabathengi. Ngaba unayo okanye uceba ukuthenga i-Android ye-Chinese? Emva koko eli candelo liya kukunika umdla.
I-Cubot Pocket: i-smartphone yepokotho, ene-intshi ezi-4 kuphela kunye nesiphelo esiphezulu
Xa i-Samsung ikhupha iNqaku lokuqala, abavelisi abaninzi bahlekisa ngobungakanani besixhobo. Nangona kunjalo, ngokutsho…
Kuqinisekiswe ukuthengiswa kwehlabathi jikelele kwe-UMIDIGI F3 eya kuqala kwi-2022 Fan Festival
por U-Emilio Garcia yenzayo Iinyanga ze2 .
I-UMIDIGI ibhengeze ukuba umnyhadala wayo olandelayo wabalandeli baka-2022 uza kubanjwa nge-19 kaMeyi kulo nyaka….
I-UGREEN ikhupha iZibonelelo eziMangalisayo: Ii-Headphones ezingenazingcingo, i-HDMI Switcher, i-Mobile Stand kunye ne-USB Charger
Umenzi we-UGREEN waziwa ngokunikezela ngezixhobo ezininzi eziphathwayo kunye nezisombululo, nokuba ziitshaja, iintambo zombane, iifowuni eziphathwayo ze…
Thatha ithuba lonikezelo lwentshayelelo yeDoogee S98
Itheminali entsha ehexayo okanye ifowuni ehexayo esandul’ ukufika emarikeni yiDoogee S98. Ukuthatha ithuba le…
Fumana iCubot P50 entsha nge $99,99 nje kuphela
Njengoko besibhengeze kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, i-terminal entsha evela kumenzi weCubot ngoku iyafumaneka kwintengiso….
I-Doogee S98: ixabiso kunye nomhla wokukhutshwa
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo sathetha ngenkcazo ye-Doogee S98, ifowuni entsha enzima evela kwinkampani yeDoogee ...
UMIDIGI A13 Pro, A13 kunye ne-A13S: iinkcukacha, ixabiso kunye nokufumaneka
Njengoko besibhengeze kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, umenzi we-UMIDIGI usandula ukubonisa ngokusemthethweni uluhlu olutsha lwe-A13,…
ICubot ngoku iyafumaneka eFanno, ineefowuni ezininzi ngamaxabiso amangalisayo
Umenzi weCubot usandula ukubhengeza ukuba ufikelele kwisivumelwano kunye neqonga le-e-commerce leFanno, apho…
ICubot entsha ye-P50: ngakumbi kunye neempawu ezingcono, ngaphantsi
Ngokwenyani kwidinga layo lonyaka kunye nabathengi bayo, umenzi weCubot unikezela namhlanje, nge-10 kaMatshi, ukubheja kwakhe ngo-2022,…
Imifanekiso yokuqala ye-UMIDIGI A13 Pro iyahluzwa
Umenzi we-UMIDIGI, omnye wabavelisi abadumileyo kwicandelo leefowuni ezihexayo, owasungulwa kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo…
I-UMIDIGI BISON GT2 5G, i-5G yokuqala ye-rugged mobile kolu luhlu, kunye nokunikezelwa kwe-Aliexpress
Uninzi lwabalandeli bomenzi we-UMIDIGI bebeyilindile, uphawu lubhengeze ukuba intengiso yokuqala yehlabathi ...
Apho ukuthenga mobiles Chinese
Iipilisi zeTshayina ezilungileyo